Izindaba - LSR liquid silicone mold application
I-gel silica gel isifinyeziwe njenge-LSR, okuwumkhiqizo ongathandwa ngabathengi nabakhiqizi. I-gel silica gel yenziwe ngemikhiqizo ye-silica gel. Inokunwebeka okuhle, ukumelana namanzi nokuswakama umswakama, futhi iyamelana ne-asidi, i-alkali nezinye izinto zamakhemikhali. Ngokuvamile kusetshenziselwa ukufaka esikhundleni imikhiqizo yepulasitiki yansuku zonke.
Ubuchwepheshe be-Liquid silicone injering molding technology (LIM) buyindlela entsha futhi ephumelelayo yokubumba irabha eyenziwe ekuqaleni kwawo-1970. Ihlanganisa ukusebenza okuhle kakhulu kuketshezi abicah abicah nemishini ekwazi ukuqeda ngokunembile nangokuphelele umjovo wokubumba. Uhlobo olusha olwakhiwe lobuchwepheshe benjoloba bokwenza iraba nobuchwepheshe bokucubungula ludinga izingxenye ezimbili kuphela (ezingafaka futhi izinto ezisizayo ezifana nokufaniswa kombala) kwimishini, futhi inqubo kusuka ekuphakeleni, ekulinganiseni, ekuhlanganiseni ekubumbeni izenzakalelayo ngokuphelele. Lobu buchwepheshe bokucubungula bungafinyelela injongo yokwenza lula inqubo, kunciphise isikhathi sokucubungula, okonga izinto, nokwenza ngcono ukusebenza kahle. Futhi ngokuyisisekelo akukho mkhawulo wemfucuza enqubeni yokukhiqiza, enenzuzo ekuvikelweni kwemvelo.
Lonke uhlelo lomjovo wokubumba luhlukaniswe izingxenye ezilandelayo:
Iyunithi yokuqala iyunithi lokulinganisa nokudla, elinganisa ngokunembile izingxenye ezimbili zerabha eketshezi engamanzi ngqo kusuka emgqonyeni wokupakisha ungene ohlelweni ngokusebenzisa ipuleti lokucindezela u-hydraulic;
Iyunithi yesibili iyunithi yokuxuba. Izingxenye ezimbili ezingena ohlelweni zixutshwe ngokuphelele ngokufana ngomxube we-static, futhi awekho amabhamuza afakwa ohlelweni;
Iyunithi lesithathu iyunithi lokufaka umjovo. Izinto ezihlanganisiwe zenjoloba engaxutshwe nalutho zifakwa ngobuningi kusikhunta ngeyunithi yomjovo, futhi isatshalaliswa ngokulinganayo emgodini ngamunye, bese ivuthiswa ngokushisa. Yonke le nqubo izenzakalelayo ngokuphelele, futhi akukho ukulawulwa okwenziwa ngesandla okwenziwa ngemuva kokusetha amapharamitha wokuthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza.
Izinto ezivimbelayo ekusebenzeni kahle kokukhiqizwa kwe-LSR
I-LSR inezinzuzo eziningi kakhulu, kufanele ibe nethemba elibanzi kakhulu emakethe. Kepha maqondana nobuchwepheshe bomkhiqizi wamanje, i-LSR ayinabo ubungane kangako, obunomkhawulo wokusebenza kahle kokukhiqiza. Ngokuphathelene nokusebenza kahle kokukhiqiza, ungabheka kulesi sibalo esilandelayo. Ingxenye A iqukethe i-catalyst futhi ingxenye B iqukethe i-ejenti yokuxhumanisa. Ngemuva kokuxubana no-1: 1, ufakwa esikhunjeni ngesikulufa esikhethekile bese uhlanganiswa ne-elastomer ekushiseni okuphezulu, bese welashwa kusikhunta. ukwakha.
Izingqinamba ezinkulu ezibhekene nazo njengamanje zifaka:
1. Ijubane elapha impahla uqobo lwayo yi-5-8S / mm, ekhawulela ukukhiqizwa komjovo womjovo ngejubane elisheshayo.
2. I-liquid silicone ine-fluidity ephezulu ngaphambi kokuphulukiswa, futhi kulula ukukhiqiza i-flash ngesikhathi senqubo yokubumba umjovo, edinga izidingo eziphezulu ekunembeni kokusebenza kwesikhunta nokunemba komshini wokubumba umjovo.
3.Imikhiqizo ye-silicone engamanzi ithambile, futhi umkhiqizo uzokwanda ngevolumu ngesikhathi senqubo yokwelapha, bese uncipha ngevolumu ngemuva kokupholisa, okubangela ubunzima obukhulu ekubekeni komkhiqizo ngesikhathi sokukhiqiza okuzenzakalelayo.